Strengthening Harmony Between Communities - Oromo by Edmonton Police Service - issuu
Harkaa Kan Hariiroo Hawaasa fi Poolisa Edmonton Jidduu Jiru Jabeessu
KITAABA harkaa hariiroo jabeessuuf Kitaabni harkaa kun kan barbaadameef gayee Poolisummaa Edmonton hubachuuf akka si gargaaruuf; odeessa akkaataa itti tajaajila Poolisatti dhihaattu siif kennuuf; fi yo Poolisa sitti dhihaate maal akka irraa eegdu siif ibsuufi. Ammallee mirgaa fi itti gaafatamummaa jarri lachuu miseensonni hawaasaa fi poolisni qaban ibsa. Hubannoo gaarii akka itti polisni si gargaaru qabaachuun, ammallee hariiroo tajaajila Poolisa Edmonton waliin jiru jabeessuuf tajaajila/gargaara. Citizenship fi Immigration Canada galataan beeksisuu barbaanna gargaarsa isaan maallaqaan nuuf godhaniif fi Tajaajilli Poolisa Edmonton nu waliin tahuu fi murannoo hawaasa Edmonton garaagarummaa isaanii waliin tajajilluf qaban. Nu waliin tahinsi gama isaanii kitabaa harkaa kana akka tolchinutti nu geese.
Maali Gayeen Poolisaa Edmonton Keessatti? Gayeen Tajaajila Poolisa Edmonton tika lubbuu fi qabeenyaa kennuu dha; nagaya ummataa fi tartiiba gaarii kunuunsuu; fi hambisuu, qoratuu fi yakka furuu dha. Bakka poolisni yakka hambisuu hin dandayinitti, galiin isaanii qoratuu fi yakka-hojjataa sirna haqaatti dhiheessuuf. Ummanni Edmonton mirga nagayummaan mana isaanii fi hawaasa keessatti Itti dhagayamuuti qaban. Poolisni rakkoo ollaan qabu ni hubata fi hawaasaa waliin walitti dhiheenyaan hojjata yakki akka hin uumamne hambisuuf. Galiin kanaa lammii magaalaa teenyyaa hundaaf jiruu mishaa irra caalutti ol wayyeessu. Poolisoonni (police officers) itti gaafatamummaa hojii isaanii ogummaan raawwachuu fi amala namusaa ol aanaa hojii hojjatan hunda keessatti mullisuu. Qaceelfamni Tajaajila Poolisa Edmonton ni mirkaneessa akka miseensi isaa akka nama tokkollee adda hin fille hundee biyyoolessa yokaan gosa isaa irraa argaman, afaan, halluu, amantii, saala, umrii, surrii yokaan dandeettii nafaa, hawata saalaa (sexual orientation) yokaan sababoota wal fakkaatan irratti irkachuun.
Hojii EPS (TPE) Kan Qajeelfamuun Fahidaa Dhabbataa Ifa Taheeni : SANSAKKAA - Yeroo hunda waan sirrii tahe sababa sirrii tahe tokkoof hojjachuu. ITTI GAAFATAMUMMAA - itti gaafatamoodha murtiilee fi gocha Kan keenyaa taheef KABAJAA - Namoota biraa kabajuu akka nuti ofii kabajamuu Jaalannutti AJAA’IBA UUMUU - olaantummaa fi waa uumuu faana dhawuu GOOTUMMAA - jabina eeguu morkiilee ciccimoo keenya fuuladuratti HAWAASUMMAA – kabajuu fi ulfeessuu hawaasa bifa hedduu kan Tiksuuf Murannee fi Tajaajiluuf itti Boonnu.
Lakkoysota Bilbilaa Tajaajila Poolisa Edmonton Qunnamuuf Bilbili 9-1-1 Hatattama qofaaf Wanneen hatattama hin tahiniif 780-423-4567 Maali Hatattamni? Hatattamni wanni hammatu ibidda, yakka hojjatamaa jiru, yokaan waan fayyaa yokaan haala lubbuu nama sodaachisu kan Ambulansii barbaachisu. Wanni Hatattama hin tahin maali? Hatattama wanni hin tahin kanneen akka hannaa, passaportii badee, soba (badii) fi gaaga’ama konkolaataa yeroo madaawuun hin jirre. Bilbili 780-423-4567 •	Yo kan Poolisni akka iddoo tee dhufu barbaadde •	Yo kan gorsa akkataa gabaasa yakkaa itti fuftu barbaarde
9-1-1 HATATTAMA QOFAAFI Yeroo 9-1-1 bilbiltu hojjataan bakka sanaa akkana je’ee deebisa, Hatattama. Poolisa ni barbaaddaa, Ibidda moo Ambulaansii? Yo hojjataan 9-1-1 afaan ati dubbachaa jirtu hubachuu dadhabe, afaan kam akka dubbattu baruuf si gaafata/ti. Yo sababuma fedheefuu yaada waldabarfachuu dadhabdan, hojjataan yoggusuma Poolisa tessoo bilbilli sun irraa dhufetti erga. Yo hojjataan telephonaa kan afaan ati dubbachaa jirtu murteessuu dandayu tahe sarara tajaajila afaaniitiin Turjumaantichi afaan kee dubbatu hojjataa 9-1-1 tti waan hatattamni kee tahe himuu si gargaaree gargaarsi ati barbaadduu siif ergama.
Maaliin Godha Yeroo Poolisni Mana Kiyya Dhufe ? Manni kee bakka haalaan kabajamaati. Dhugatti, manni Murtii kanaadaa kabajamummaa mana nama tokkoo sirritti qeebala. Ati mana kee keessatti mirga dhunfaa keetii qabada fi poolisni mana kee haala murtaawe keessa qofatti seenuu dandaya. Poolisni mana kee kan seenuu dandayu yeroo: •	Yeroo ati isaan keessatti ol afeerte yokaan seenuu hayyamteef •	Haalli hatattamaa yo jiraate, kan akka yeroo ati 9-1-1 bilbiltee •	xalayyaa seeraa kan akka seenan hayyamtuuf yo qabaatan, kan akka hayyama sakattaa abba murtiitiin yokaan mana haqaatiin. Yo poolisni balbala keetitti dhufe, deebisiif fi sammutti qabadhu akka duursi Poolisa nagayummaa ummataa mirkaneessu tahe. Haala hedduu keessatti, poolisni tarii hubachuu hindandayu yokaan hinbeeku adaa garagaraa kan akka teetii. Fedhinnaa kee Poolisaaf ibsuun haalaan barbaachisaa dha. Fakkeenyaaf, Poolisatti himaa naannoo waaqeffanaaf tolfame yo qabaattan. Gafii yo qabaattan gaafachuu hin qaanfatinaa yo waan tokko hubachuu hin dandayin. Ammallee , ibsuu hin qaanfatin waan murtaawe tokko kan Poolisni sun hin hubanne. Poolisni sun wanni achi jiruuf siifii hawaasichaas gargaaruufi.
Yo Kaniin Ani Ingiliffaa Hin Dubbanne Yokaan Hin Hubanne Tahe Hoo? Miseensa hawaasaa hedduuuf, Ingiliffaan afaan lammaffaati. Yo ingiliffaa hin dubbanne, miseensa maatii keetii yokaan hiriyaa kee kan dhimma Poolisan walqabate irratti si gargaaru qabaachuuf yaalu qabda. Yo kun hin dandayamne, Tajaajjilli Poolisa Edmonton tarree hojjattota Poolisa kan afaan lama dubbatan qaba kan si gargaaru. Tasuma hin mallatteessin waligaltee yokaan dukumantii dhimma seeraa irratti yo guututti waan waliigaltuuf sana hubatte malee
Ani Maaliin Godha Yeroo Poolisni Tokko Karaa Irratti Natti Dhufe? Yeroo hedduu Poolisa uffata isaaniitin adda baasu dandeessa. Yeroo takkatakka tarii Poolisa uffata isaanii hin uffanne ni qunnamta. Yo eenyummaa Poolisaa shakkite, mallattoo sirnaa eenyummaa isaanii gaafachuu ni dandeessa, maqaa Poolisaa fi lakkoysa mallattoo isaa dabalatee. Polisni tarii maqaa kee, tessoo, maal godhaa akka jirtu yokaan eesssa akka deemaa jirtu si gaafachu dandaya. Haala garii keessatti, polisni xalaayaa eenyummaa kee laaluuf tarii si gaafata. Haala irra caalaa keessatti, eenyummaa kee mullisuuf hin gaafatamtu. Garuu, gorfamaadha amala gaarii garsisuu fi gaafii sanaa deebisuun Yo gaafii poolisaa sana deebisuu didde yokaan, polisni ati namaa mucucaataa tahuu kee yaade, tarii caalatti Si shakkee ciminaan Si qorata. Galiin nama hundaatuu furmaatatti dhaqqabuudha yokaan yakka furuudha.
Poolisni bifa waliigalaatti haala lama keessatti si qabuu yokaan si hidhuu ni dandaya. 1.	Yo si shakkan yokaan badii hojjachuu keetitti amanan 2.	Yo sirritti sii badii hojjatu si arkan. Yo Poolisni haala lameen kana keessa tokkotti si qabe yokaan hidhe dirqama maqaa kee, teessoo fi mallattoo dhiheessuu qabda. Poolisni dirqama kakuudhaan yakkaa hambisuu fi qoratuuti qaba akkasuma nagayummaa eeguu. Dirqamni kun kan hammatu warren ragaa yakkaa tahuuf dandayan odeeffachuu fi haala irratti irkachuun namoota shaakkamoo tahanii mullatan odeeffachuu. Yo namni yakka hojjate sun laayyotti adda baafame akka itti mullatanitti yokaan uffatanitti, poolisa tahuun laafaadha. Ammo dhugaan jirtu Poolisni qoratu qaba. Kana jechuun Poolisni tarii si waliin haasawuuf si gaafata sababa yeroof sinsinni tokkollee siif hin kennine yogusummatti. Gaafii poolisni si gaafatu akka miidhaatti hin fudhatin. Isaan hojii isaanii hojjachaa jiranii, yakka hambisuu fi nagayummaa keetii fii kan hawaasaa eegu gargaaruufi.
Ani Gaafiilee Poolisaa Deebisuun Qaba Moo Ifiin Ibsaa ? Waliigalatti, dirqama tokkollee jala hin jirtu mataa kee poolisaat ibsuuf. Garuu, kan addaatu jira. kan waan asii-gadii Kana hammatu. •	Yo konkolaataa oofaa jiraatte •	Yo badii hojjatte kan akka badii dhugaatii, badii weeraruu, badii konkolaachisuu, yokaan badii yakkummaa. Halleen kana keessatti, waliigaluu fi gaafii poolisaa deebisuun irra filatamma dha. Yo poolisni badi hojjatte je’ee si shake yokaan shaakkiin tarkaanfii fudhate, eenyu akka ati taate baru barbaadu. Sababoota hedduu Poolisaaf eenyummaa kee himtuutu jira. 1.	Yo kan Poolisni nama biraa barbaadutti jiru tahe, tarii ati akka hin qabamne yokaan hin hidhamne hambisuuf nama sana akka hin tahin agarsiisuudhaani; 2.	Yo poolisni sihi kan badii hojjate je’ee amane ; fi yo ati eenyu akka taate isaanitti hin himne, isaan si hidhanii ti buufata isaanii si tursiisuu hamma eenyummaa kee adda baafatanitti; 3. Yo poolisni ati yakka gad aanaa hojjatte ja’anii amananii fi yo ati haga isaan quubsutti of ibsite, tarii tikeeta sitti kennu yokaan hubachiisa yoom akka mana murtiitti dhihaattu si gorsu siif kennu si hidhuu irra.
Poolisni Sababaan Ani Hidhamee Jiruuf Naaf Himu Qabaa ? Ee! Poolisni dirqama sababa isaan hidhamaniifi yokaan tursiifamaniif ummatatti himu qaba. Kuni barbaachisummaa qooda 10(a) waliigaltee (charter) Mirgaa fi Walabummaa lammii Kanada (Canadian Charter of Right and Freedom)
Maaliin Godha Yeroo Poolisni Tokko Osoon Konkolaachisaa Jiruu Akkaan Dhaabu Na Ajaje? Poolisni aangoo qaba konkolaataa yeroo kamiyyuu dhaabee konkolaachisaan yo kan farsoo yokaan qoricha nama macheessu soorate tahuu murteessuu, konkolaataan fayyaa tahuu, konkolaachisaan xalaayaa hayyama qabaachuu fi konkolaataan inshuraansii seerawa qabaachuu. Sababni hunda caalaa fakkaataan poolisni konkolaataa dhaabuuf badii gara yaa’a konkolaataatiin (traffic) qoratuufi. Badii/yakki/ yaa’a konkolaataa bakka lama gurguddatti adda qoodama Jeequmsa sossoohaa: Ariifachiisuu, ifaa diimaa yokaan asxaa dhaabii irratti dhaabuu hanqatuu, sirnaa ala xurree jijjiruu, yokaan konkolaataa biraa duukaa haalaan bu’uu. Jeeqama sossoohaa hin tahin: qabattoo teessumaa hidhatuu hanqatuu, Ifaa fireenaa caphaa, yokaan xalaayaa hayyama konkolaachisuu dhiheessuu hanqatuu, galmeessa konkolaataa, yokaan mirkanii inshuraansii konkolaataa. Sababni biraa kan osoo konkolaachisaa jirtuu itti dhaabbatamtu wanni hammatu: •	Machaawanii konkolaachisuu (fkf. Dhuganii offuu) fi kellaatti •	Gaaga’aa yokaan dantadhablummaan konkolaachisuu •	Qormaata yakkaa. Fakkeenyaaf, ati, imaltoonni kee fi/yokaan konkolaataan kee tarii ibsa nama silaa poolisni barbaaduu waliin walfakkaachuu. •	Dhimma nagayummaa Sababa hedduuf, yaa’a konkolaataa dhaabuun haala hunda caalaa gaaga’aa hojii Poolisaa ti. Poolisoonni hedduun kan madawan yokaan du’an dirqama biraa caalaa osoo hojii dedeebi’anii yaa’a konkolaataa dhaabaniiti. Poolisni dirqama gochaa fi amala nama konkolaataa keessaa fassarachu qaban, akkasuma walitti dhaabanii yaa’a konkolaataa biraa tohachuu. Sababa kanaaf, poolisoonni konkolaataa bifa nagayaatiin dhaabuuf ni leenji’u, tartiibota murtaawan faana bu’uun. Tarii ati haala isaan itti konkolaataa keetitti dhihaatan sitti dhagayama taha, garuu isaan si doorsisuuf miti.
Yo osoo konkolaachisaa jirtuu poolisaan akka dhaabdu ajajamte •	Suuta oofii, fageenya haga siif dandayametti gara mirgaatti qabii karaa irraa baasi. •	Konkolaataa kee keessa turi yo addatti polisaan qajeelfamte malee. •	Waan poolisni godhi siin jedhu hunda godhi. •	Harka kee bakka poolisni arkutti tursiisii sochii tasaa/ hatattamaa hin godhin. •	Qophaawi dokomantii poolisni si gaafatu dhiheessuuf. akka konkolaachisaa konkolaatatti seeraan gaafatamata, yeroo poolisni si gaafate, xalaaya hayyama konkolaachisuu yeroodhaa, galmeessa, mirkanii inshuransii konkolaataa. •	Yo dokomantiin kan korojoo keessa yokaan borsaa harkaa keessa jiraatte, duursii aangawatti himi dokomantii akka keessaa fuudhuu yaadu kee. •	Yo kan tikeeta fudhattu tahe, qabbanaan fudhadhu. Tikeeta qeebaluun badii amanuu miti Akka konkolaachisaatti, atilleen itti gaafatamaa dha, amala imaltoota keetitiif, keessattuu yo isaan sirnadhablummaan sossoohan, yo waa fooddaan haran yokaan fooda irraa alatti rarra’an. Ammallee ati dirqama imaltoonni hundi qabattoo tessumaa hidhachuu mirkaneessu qabda.
Maali Mirgoonni Kiyya Yoon Hidhame? Waliigalteen Mirgaafi Walabummaa Kaanadotaa mirgoota tokko tokko kanneen yo ati hidhamte yokaan poolisaan qabamte si tiksan lafa kaaya. Mirgoonni kun kan hammatan: •	Mirga daddaftitti odeeffannoo sababa hidhamteef yokaan tursiifamteef argachuu. •	Mirga daddaftiin gorsaa (abbaa seeraa) qabachuu fi qajaalchuu fi odeessa mirga sanaa argachuuf. Jechi “osoo hin turre” akki itti hiikame eega haalli dhunfatama jala galeen fi nagayumma nama hundaa mirkanaawe. •	Mirga abbaa seeraa kan hawwite kamittuu bilbilachuu. •	Mirga gorsa tolaa gargaarsa seeraa abbaa seeraa irraa. Yo ati umriin amata 18 gadi taate, mirga dabalataa kan daddaftiin haadhaa abbaa fi namoota gaa’eessota biraa barbaachisoon dubbachuu dandayuu qabda. Poolisni dirqama mirgoota kana siif ibsu qaba.
Yoon Hidhame Ingiliffaa Dubbachuu Hindandeenye Hoo? Yo hidhamtee yokaan qabamtee fi ati Ingiliffaa hin dubbanne poolisni dirqama tarkaanfii fudhachu qaba afaan keetiin si waliin haasawuuf, kanneen akka turjumaanatti fayyadamuu. kuni akkasi isaan mirga kee sirritti si hubachiisuu fii haala ati itti mana hidhaa keessaa gad lakkifamtu siif himu qaba.
Yeroo Akkami Poolisni Tokko Si Sakata’uu Dandaya? Waligalatti, humniti poolisni sakata’uudhaa haalaa fi amantaa poolisticha sanaa irratti irkatti. Yo ati hidhamte, poolisni meeshaaf si sakata’u dandaya, meeshaa tarii harkaa baafachuuf si gargaaru, fi ragaalee badii kan ati hidhamteef. Isaan yeroo hedduu sakattaa harka irra babaasuu akka poolisichi wayaa tee irra harka babaasuu, kiisha keetiis dabalatee. Huccuu takkallee sirraa baasuu hin dabalatu wayaa/ huccuu gama alaa malee kan akka jaaketaa, kaloytaa, shuraabaa fi lastikafi shurraba harkatti kaayyatanii. Haala irratti irkachuun, tarii isaan naannoo sitti dhihaatu hunda sakata’uu ni dandyan konkolaataa kee dabalatee yo ati keessa jiraatte yeroo hidhamtu sana. Yo kan yeroof tursiifamte sababa qormaataaf jecha, poolistichi tarii qaamaa qaqqabachuun waan akka meeshaa lolaatti fayyaduu dandayu sakataa geggeessuu. Kana jechuun isaan tarii harka isaaniitiin si qaqqabatanii akka ati meshaa lolaa tokkollee hin qabne mirkaneffachuu dha. Yo ati hidhaa jala hin jirre yokaan hin qabamin, akka hin sakata’amne diduu ni dandeessa. Garuu, tarii akka poolisni si sakata’u hayyamuuf murteeffachuu waan tarii kuni shakkii isaanii sirraa xiqqeessuu gaargaaruuf. Yo jalqaba irratti akka polisni si sakata’u waliigaltellee, akka dhaaban gaafachuu ni dandeessa yeroo kamuu osoo si sakata’aa jiranuu. Yo sakattaan isaanii sirnaa ala tahuun sitti dhagayamte, poolisa waliin hin morkin. Bakka sanaa, haala itti himata dhiheeffattu kan kitaabee kana keessatti tarreefame faana bu’u, yokaan abbaa seeraa qunnamuu dha.
Yoon Ani Waayee Poolisaa Irratti Himata Qabaadhe Hoo? Lammiiwan yaadu qaban poolisoonni keenyaa sadarkaa ol’aanaa haalaan caalutti qabamuuf. Yeroo qabiyyee himmannaa fi yaaddoon lammiiwwanii dhihaatan, isaan dirqama haala haqaatii fi yerootiin qoratamu qaban. Dameen Sadarkaan Ogummaa TPE( tajaajila poolisa Edmonton) itti gaafatamummaa himata poolisa irratti dhihaate bifa haqaa, qalbiqabeenyaan fi babsii hin qabnee qoratuuti qaba. Ati himata dhiheeffachuu dandeessa waayee qajeelfamoota yokaan tajaajiloota Tajaajila Poolisa Edmontoniin kenname yokaan waayee gocha poolisa TPE tokkoo. Himanni dirqama barreeffamaan tahu qaba fi dirqama nama himata sana dhiheeffateen mallataawu qaba. Tarii himata kee bifa xalaatti barreessuu yokaan tarii uunkaa waaltawe kan buufata TPE irraa argachuu dandeessutti fayyadamuu yokaan Komishina Poolisa Edmonton irraa argachu dandeessa. Himata dhiheeffachuu kan dandeessu dirqama amatuma mudannoo sun tahe keessatti qofa. Himanni dirqama postaan ergamuu, faksii godhamuu, yokaan buufata TPE kamittuu kennamuu, poolisa tokkotti yokaan waajira komishina Poolisa Edmontonitti geessuu. Ammallee Tajaajila Poolisa Edmontonitti bilbiluu ni dandeessa. Tajaajila, Damee Sadarkaa Ogummaa 780-421-2676
Komishina Polisa Edmonton Qunnamuuf:
Polisummaan ogummaa fi safuu ilaalcha bu’a qabeessa Tajajilli Poolisa Edmonton fi Komishinni waliin hirmaataniidha. Komishinni himannaan garee dhimma kana keessa hirmaatanii hundi akka ciminaan raawwatamuuf ni mirkaneessa
Addatti ati dirqama: •	Lammii Kanada tahi yokoon sadarkaa qubataa dhaabbataa kanadaa qabaadhu; •	Qaamaa fi surrii dhaan dirqama iddoon sun barbaaddu nama raawwachuu dandayu tahi, nagayummaa mataa keetiif dhimmi, fi nagayummaa miseensa hawaasaa; •	Guututti kutaa 12 xumuri yokaan kan saniin qixaa (GED) qabadhu;. Yeroo barnoonni kanada alatti xumurame, xalaayaan ragaa (International Qualification Assessment Certificate) ni barbaachisa; •	Xabiyaa hamilee gaarii fi amala qabaadhu, Kana jechuun ati nama ummannii biraa akka abdatamuu laallatan fi sansakkaa qabu dha; •	Hayyama konkolaachisaa Alberta kan yeroon irraa hin dhumin mirga guutuu hayyamni qabuu waliin fi tuqaan irrina kan jaha hin caalle qabaadhu; •	Xalaayaa ragaa gargaarsa jalqabaa (First Aid/ CPR) sadarkaa C qabaadhu yeroo odeeffata dhunfaa saaxiluu irratti; •	Qulqulleessa nagayummaa (security) dabruu dandayu akkasuma qorata duubbee, mugoota fi qorata bakka bu’aa.
Akkamittiin Ani Poolisa Taha?
Odeessa kana caaluuf:
Naannoo Edmonton Keessatti bilbili: Bilbila: (780) 414-7510 Faaksii: (780) 414-7511 Yokaan Katabiif: Edmonton Police Commission Suite 171, 10235-101 Street Edmonton, Alberta T5J 3E9 Komishinni Poolisa Edmonton, tohata raayyaa (civilian) kan Tajaajila Poolisa Edmonton dhiheessa. Hojii isaaniiti tajaajilli polisaa akka ciminaan, fahida qabeessa fi itti gaafatama polisummaan ummata Edmonton hundaaf mirkaneessu.
Tajaajilli Poolisa Edmonton jabinaan namoota hawaasa garagaraa magalaa teenya bakka bu’anii Poolisa tahan barbaada. Edmontonitti, kuufamni aadaan hedduu keenyaa guddachaa waan dhufeef fedhinna tajaajila poolisa keenyaati ballinaan hawaasa tajaajilu kana calaqisuun. Hojii poolisuummaaf akka qalbitti qabatamtu, dirqama ulaagaalee barbbachisan gad-aanoo seera tajaajila poolisaa keessatti tarreeffaman guutu qabda:
Weebsayitii Tajaajila Poolisa Edmonton dhaqaa bakka www.Edmontonpolice.ca yokaan 780-421-2233 bilbilaa.
Tajaajilli poolisa Edmonton galataani beeksisa Alliance Jeunesse-Famille de Lâ&#x20AC;&#x2122;Alberta Society yaada kitaaba harkaa kana calleessutti nu geesse uumuuf.
AJFASâ&#x20AC;&#x2122; main mission is to prevent crime amongst Francophone immigrant youths and families, as well as to help them find a sense of belonging in the Albertan society and workplace..
Strengthening Harmony Between Communities - Oromo